'लाईक' भन्दा दोब्बर 'डिसलाईक' पाएको भद्रगोल २२० औँ भाग, दिपकराज गिरीले लेखे मन छुने स्टाटस ! - Lokpath Lokpath
‘लाईक’ भन्दा दोब्बर ‘डिसलाईक’ पाएको भद्रगोल २२० औँ भाग, दिपकराज गिरीले लेखे मन छुने स्टाटस !
प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७६, सोमबार १५:२०
काठमाडौं – चर्चित टेलिफिल्म भद्रगोलको पछिल्लो श्रृंखलामा लाईकभन्दा दोब्बरजस्तै डिसलाईक आइरहेको छ । टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल ६ हप्तापछि पुन प्रशारणमा आएको छ । तर, गत शुक्रबार प्रशारित नयाँ एपीसोडले दर्शकलाई खुशी पार्न सकेको देखिएको छैन । दर्शकले मन पराएका कलाकार बिना आएको सो नयाँ सिरीज करिब करिब बहिस्कार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैबिच निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो विचार राख्दै लोकप्रियताको शिखरमा रहेको “भद्रगोल “कार्यक्रमको निर्माण टिम र ब्यबस्थापन बिचको मनमुटाबको खबरले यस सिरियलको फ्यानहरूमा ठूलो अन्याय भएको महसूस गरेको बताउनुभएको छ । आफू हाँस्य ब्यग्य क्षेत्रकै कलाकार भएको नाताले पछिल्लो समयमा बिकसित घटनाक्रम हेर्दा एकदमै असहज महसूस भएको उहाँको धारणा छ ।
भद्रगोलबाट निर्देशकद्वय कुमार कट्टेल जिग्री र अर्जुन घिमिरे पाँडेसहितको २१ जनाको पुरानो टिम बाहिरिएपछि मिडिया हबले नयाँ टिम बनाएर भद्रगोल पुनः सुरू गरेको हो ।
केहि समय पछि प्रसारणमा आएको शृखंलाले दर्शकको ताली भन्दा पनी गाली बढी खेपिरहेको छ । प्रसारित २२० अंक अहिले युट्युवको ट्रेण्डिङमा छ तर दर्शकले भिडियो लाई लाईक भन्दा बढी डिसलाईक गरेका छन् ।
बहुचर्चित हास्य टेलिश्रृखला कहिले आउँछ भनेर कुरेका दर्शक यो सिरीज आएपछि भने आलोचनामा उत्रिएका छन् । आलोचना मात्र हैन लाईक भन्दा बढि डिसलाईक आउदा दर्शकले बहिस्कार नै गरे भन्दा फरक पर्दैन । यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्बजनिक २२० भागलाई लाईक गर्नेको संख्या १८ हजार छ भने डिसलाईक गर्नेको संख्या ३५ हजार पुगेको छ । डिसलाईकको संख्या बढिरहेको छ । त्यस्तै १३ हजार बढि कमेन्टमा सबैले सो भागको बिरोध गर्दै पुराना कलाकार नै चाहियो भन्दै मिडिया हबलाई भनिरहेका छन् ।
आफ्नो स्टाटसमा उहाँले लेख्नुभएको छ ।
“भद्रगोल “सिरियलको बिषयमा ”’
लोकप्रियताको शिखरमा रहेको “भद्रगोल “कार्यक्रमको निर्माण टिम र ब्यबस्थापन बिचको मनमुटाबको खबरले यस सिरियलको फ्यानहरूमा ठूलो अन्याय भएको महसूस गरेको छू…आफू हास्य ब्यग्य क्षेत्रकै कलाकार भएको नाताले पछिल्लो समयमा बिकसित घटनाक्रम हेर्दा एकदमै असहज महसूस भएको छ ।।। दूबै पक्ष बिच सहमति कायम होस् र भद्रगोल पूरानै अबस्थामा प्रसारण होस भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छू
भद्रगोलका लोकप्रिय पात्रहरू लाइ दर्शले हेर्न चाहेका हुन् … अत दूबै पक्षलाइ अन्याय नहोस समझदारीमा पुनस्यो लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारण होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छू …
फ़ुटेर होइन जुटेर अघि बढौ ।
यसअघि लोकपथ डटकममा प्रकाशित यी सम्बन्धित समाचार पढ्नुभएको थियो ?
भद्रगोल बन्द हुनुको भित्री कुरा, अब के हुन्छ ?
भद्रगोलकी मुन्नी बनिन् डाँडाघरे काँईली (भिडियो सहित)
भद्रगोल रोकिनुको चुरो कुरो